I-Sonochemical Reaction ne-Synthesis - Hielscher
I-Sonochemistry yi-application ye-ultrasound ekuphenduleni kwamakhemikhali nezinqubo. Inqubo eyenza imiphumela ye-sonochemical in oketshezi yiyona yinto ye-acoustic cavitation.
Ama-Hielscher ama-laborator we-ultrasonic elebhu kanye nezimboni asetshenziswa ezinhlobonhlobo zezinqubo ze-sonochemical. I-Ultrasonic cavitation iyaqina futhi isheshise ukusabela kwamakhemikhali okunjengokuqamba kanye ne-catalysis.
Imiphumela elandelayo ye-sonochemical ingabonakala ekuphenduleni kwamakhemikhali nezinqubo:
ukwandisa ngesivinini sokuphendula
ukwanda kokukhipha okwenziwe
ukusetshenziswa okungaphezulu kwamandla
Izindlela zesimiso se-sonochemical for switching reaction reaction
ukuthuthukiswa komsebenzi wezinsiza zokudluliswa kwesigaba
ukugwema izidakamizwa zokudluliswa kwesigaba
ukusetshenziswa kwama-reagents angcolile noma ezobuchwepheshe
ukuvuselelwa kwezitshalo kanye nokuqina
ukwandisa ekusebenzeni kabusha kwama-reagents noma ama-catalysts (chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-catalysis esekelwa nge-ultrasonically)
ukuthuthukiswa kwe-particle synthesis
I-cavitation, yilapho isakhiwe, ukukhula, kanye nokuwa kwe-bubbles ku-liquid. Ukuwa kwe-cavitational kuveza ukushisa okukhulu kwendawo (~ 5000 K), izingcindezi eziphakeme (~ ~ 1000 atm), kanye nokushisa okukhulu nokupholisa (>109 K / sec) kanye nemifudlana ye-jet liquid (~ ~ 400 km / h). (Suslick 1998)
Cavitation usebenzisa i I-UIP1000hd:
Ama-bubbles e-cavitation awamabhulebhu ahlanzekile. I-vacuum yenziwa ngokushelela okusheshayo ngakolunye uhlangothi kanye noketshezi lwe-inert komunye. Ukuhlukana okucindezelayo okuholela ekutheni kunqobe amandla okubumbana nokunamathela ngaphakathi ketshezi.
I-cavitation ingakhiwa ngezindlela ezahlukene, njengezitshalo ze-Venturi, izibhamu eziphezulu zomshoshaphansi, ukujikeleza okuphezulu kwe-velocity, noma i-transducers ye-ultrasonic. Kuzo zonke lezo zindlela amandla okufakelwa aguqulwa abe ngumbimbi, ama-turbulences, amagagasi kanye ne-cavitation. Ingxenyana yamandla okufaka okuguqulwa ibe cavitation incike ezintweni eziningana ezichaza ukuhamba kwemishini yokukhiqiza i-cavitation eketsheni.
Ukuqina kokusheshisa kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezithonya ukuguqulwa okunamandla kwamandla abe yi-cavitation. Ukusheshisa okuphakeme kudala umehluko ophezulu wokucindezela. Lokhu nakho kwandisa amathuba okudalwa kwamabhulebhu okugcoba esikhundleni sokudalwa kwamagagasi asakazeka kulokhu oketshezi. Ngakho-ke, okuphakemeyo ukusheshisa okuphakemeyo yingxenyana yamandla okuguqulwa ibe cavitation. Uma kwenzeka i-transducer ye-ultrasonic, ukuqina kokusheshisa kuchazwa yi-amplitude ye-oscillation.
Ama-amplitudes aphezulu aholela ekudalweni okuphumelelayo kwe-cavitation. Amadivayisi wezimboni ze-Hielscher Ultrasonics angakha ama-amplitudes angafika ku-115 μm. Lawa ma amplitudes aphezulu avumela ukuphakama kwamandla okuphakama okuphezulu okuvumela ukuthi udale ukuqina kwamandla okufika okufika ku-100 W / cm³.
Ngaphandle kokuqina, uketshezi kumele kuphuthumise ngendlela yokudala ukulahlekelwa okuncane ngokwemibhikisho ye-turbulences, ukushayisana nomswakama. Ngenxa yalokhu, indlela enhle yindlela yokuhamba ngokungahambisani.
I-Ultrasound isetshenziswa ngenxa yemiphumela yayo ezinkambisweni, njenge:
ukulungiselela izinsimbi ezenziwe ngokunciphisa izinsalela zensimbi
isizukulwane sensimbi esebenzayo nge sonication
synthesis sonochemical of izinhlayiyana by imvula yensimbi (Fe, Cr, Mn, Co) oxides, isib for ukusetshenziswa njengoba catalysts
ukufakwa kwezinto zensimbi noma i-metal halides ezisekelweni
ukulungiswa kwezixazululo zensimbi ezisebenzayo
ukusabela okubandakanya izinsimbi ngokusebenzisa izinhlobo ze-organoelement ezikhiqizwa yi-situ
ukusabela okubandakanya izinsimbi ezingezona zensimbi
i-crystallization kanye nezulu lezinsimbi, ama-alloys, i-zeolithe kanye nezinye izinto eziqinile
ukuguqulwa kwe-surface morphology kanye nosayizi wezinhlayiyana ngama-high velocity interparticle collisions
ukwakheka kwezinto zokwakha ezingenayo amorphous, okubandakanya izindawo eziphezulu zokuguqula izinsimbi, ama-alloys, i-carbides, i-oxydes nama-colloids
ukususa futhi ukususwa kwe-coated oxide coating
i-micromanipulation (i-fractionation) yezinhlayiyana ezincane
ukulungiselela ama-colloids (Ag, Au, Q-C-Szed CdS)
ukuhlanganiswa kwamakhemikhali ezakhamuzi zibe yizicabha ezingavamile
ukuchithwa nokuguqulwa kwama polymers
i-sonolysis yemvelo engcolile emanzini
Iningi lezinqubo ezikhulunywa nge-sonochemical zingenziwa kabusha ukuze zisebenze ngaphakathi. Sizojabula ukukusiza ekukhetheni imishini ye-sonochemical yezidingo zakho zokucubungula. Ukucwaninga nokuhlolwa kwezinqubo sincoma amadivayisi wethu we-laboratory noma I-UIP1000hdT isethiwe.
Uma kudingekile, amadivaysi e-ultrasonic aqinisekisiwe e-FM ne-ATEX (isb I-UIP1000-Exd) ziyatholakala ukuthola indodana yamakhemikhali afuthayo kanye nokwakhiwa komkhiqizo ezindaweni eziyingozi.
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nezindlela ze-sonochemical kanye nemishini.
I-Ultrasonic Cavitation Changes Ring-Ukuvula Ukuphendula
I-Ultrasonication iyindlela ehlukile yokushisa, ukucindezela, ukukhanya noma ugesi ukuqala ukusabela kwamakhemikhali. UJeffrey S. Moore, UCharles R. Hickenboth, kanye neqembu labo ku- I-Chemistry Faculty e-University of Illinois e-Urbana-Champaign isetshenzisiwe amandla ase-ultrasonic ukuqala futhi isebenzise ukusabela kokuvula. Ngaphansi kwe-sonication, ukusabela kwamakhemikhali okhiqiza imikhiqizo ehlukile kulabo okubikezelwe yimithetho yokulinganisa i-orbital (Imvelo 2007, 446, 423). Leli qembu lixhumanisa ama-benzocyclobutene ama-1,2-disubstituted ne-benzocyclobutene ama-isomers amabili emaketangeni amabili e-polyethylene glycol, asebenzise amandla a-ultrasonic, futhi ahlaziya izixazululo eziningi ngokusebenzisa i-C13 i-spectroscopy ye-nuclear magnetic resonance. I-spectra ikhombise ukuthi kokubili ama-cis ne-trans isomer ahlinzeka ngomkhiqizo ofanayo ovuliwe, okulindeleke kusuka ku-isomer trans. Ngenkathi amandla okushisa abangela ukunyakaza okungahleliwe kwe-Brownian we-reactants, amandla kagesi we-ultrasonication inikeza isiqondiso ekuhambeni kwe-athomu. Ngakho-ke, imiphumela ye-cavitational iqondisa ngokuphumelelayo amandla ngokususa i-molecule, ukubuyisela kabusha amandla angaphezu kwamandla.
I-Ultrasonic Reactor ene-7 x UIP1000hd (7 x 1kW)
Okuqhubekayo kwe-Ultrasonic Precipitation Repactor for Sonochemical Synthesis of Particles
Ultrasonic Alternative kuya Hydro-Desulfurization
I-Ultrasonic Transesterification ye-Biodiesel
K. Suslick – I-Chemical and Effects Physical of Ultrasound
I-Chemistry Faculty e-University of Illinois e-Urbana-Champaign
C&EN – Izindaba ze-Chemical Engineering – I-Brute Force iphula izibopho
Ama-Reactors Aqhutshekiswayo Aqhubekayo Aqhutshwa yi-Ultrasound